Ndị nne na nna na-akpọ obodo na ndị nlekọta oku maka njedebe nke oge mmanụ ọkụ, iji nye ụmụaka ụwa ebe obibi ndụ na ọdị n’ihu
Dịka ndị nne na nna, nne na nna ochie na ndị nlekọta si n'akụkụ ụwa dum, anyị na-akpọku gọọmentị ka ha kparịta ụka, nakwere na mejuputa Nkwekọrịta Na-adịghị Mgbakwunye Mmanụ Ala (a Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty), n'ihi ụmụaka anyị hụrụ n'anya nke ukwuu.
Anyị na-akpọbata ụmụ anyị n’ụwa a, na-enyere ha aka ịmụta ije ije, ikwu okwu, na-akụziri ha ihe dị ịtụnanya nke ihe ebube niile gbara ha gburugburu.
Ọtụtụ n'ime ụmụ anyị ka dị obere ịmara ọnọdụ ụwa anyị na-ahapuru ha, ma ọ bụ ihe ọdachi ihu igwe ga-apụta na ndụ ha.
Ma anyị maara. Dịkwa ka ndị nne na nna, anyị enweghị ike ịgbachi nkịtị ka ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmanụ ọkụ na ndị isi ụwa na-anapụ ụmụ anyị ọdịnihu dị mma na ebe obibi kwesiri.
Mmanụ ọkụ fosil bụ isi iyi nke 86% nke ikuku CO2 na-ebute mgbanwe ihu igwe. Mmanya mmanụ riri anyị ahụ pụtara na ụmụaka nọ na mba ọ bụla gburugburu ụwa na-ekuru ikuku na-egbu egbu, ebe oké ifufe, oke mmiri ozuzo na ebili mmiri, na-okpom ọkụ na-adakwasị anyị ugboro ugboro na ike, na ike.
Ndị isi ụwa maara na ọbụna na-ekwu okwu banyere otú nsogbu ihu igwe si adịlarị ma na-akawanye njọ. Ha kwenyere na ọkwa oke osimiri na-arị elu, na ndị kachasị emetụta na ndị na-akpata nsogbu ahụ na-ata ahụhụ kachasị, ọkachasị na odida anyanwu mba uwa ana akpo Global South.
N'agbanyeghị nke ahụ, ndi na emeputa mmanụ ọkụ na-aga n'ihu dị ka ụgbọ oloko na-agba ọsọ na ọdịnihu ụmụ anyị na egwu ahụ.
A na-atụ anya imepụta coal, mmanụ na gas okpukpu abụọ karịa nke dabara na ebumnuche ihu igwe zuru ụwa ọnụ. Ndị isi anyị na-ekwu maka nkwa ihu igwe, ebe ha na-akwado ma jiri ego anyị na-akwado ọrụ mmanụ ọkụ. Anyị na-eche otú ha si enwe ike ile ụmụntakịrị taa anya na anya.
Ka anyị na-eme ka ụmụ anyị hie ụra kwa abalị, anyị na-akọrọ ha akụkọ, na-amakụkwa ha nke ọma. Ma akụkọ ha kwesiri ịnụ mgbe ha tetara kwesịrị ịgbanwe tupu oge agafee.
Anyị chọrọ akụkọ ọhụrụ, isiakwụkwọ ọhụrụ maka ụmụ anyị. Nke a bụ ya mere anyị ji esonye na oku na-eto eto na-akpọ gọọmentị ka ha bido ngwa ngwa mkparita uka iji wulite na mejuputa Nkwekọrịta Na-enweghị Mgbasa Mmanụ Ala, na-ewepụta atụmatụ zuru ụwa ọnụ iji:
Nkwụsị mgbasawanye nke nrụpụta coal, mmanụ ma ọ bụ gas ọhụrụ ọ bụla kwekọrọ na sayensị kachasị mma dị ka Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) na mmemme gburugburu ebe obibi nke United Nations si kọwaa;
Ewepupụta mmepụta mmanụ ọkụ dị ugbu a n'ụzọ ziri ezi na nke ziri ezi, na-eburu n'uche dabere na mba dị iche iche na mmanụ ọkụ na ikike ha nwere ịtụgharị; Wepu mmepụta mmanụ ọkụ n'ụzọ ziri ezi na nke ziri ezi, na-eburu n'uche na mba dị iche iche dabere na mmanụ ọkụ na ikike ha nwere mgbanwe.
Gbaa mbọ hụ na mgbanwe zuru ụwa ọnụ na 100% ịnweta ike mmeghari ohuru n'ụwa niile, kwado akụ na ụba dabere ka ịwepụ na mmanụ ọkụ, ma mee ka ndị mmadụ na obodo niile, ọ bụghị opekata mpe Global South, nwee ọganihu.
Ụmụ anyị kwesịrị ka e nwee ụwa ka mma na nha nhata. Ebe nchekwa maka mmụta, gwuo egwu na ibi ndụ. Otu ebe ha nwere ike rọrọ nrọ ma nwee olileanya maka ọdịnihu. Ụwa ebe ha nwere ike iku ume dị ọcha ma ṅụọ mmiri dị ọcha. Ebe ike dị ọcha, ịnweta yana nchekwa. Na ebe a na-eji ala na amamihe akpọrọ ihe ma na-asọpụrụ, anyị na-ebikwa n'ụzọ ziri ezi na okike. Ụmụ anyị kwesịrị inwe ụwa ka mma na nha nhata. Ebe nchekwa maka mmụta, gwuo egwu na ibi ndụ. Ebe ọ ga-ekwe omume ịrọ nrọ na ikwere n'ọdịnihu. Ụwa nke ha nwere ike iku ume dị ọcha ma ṅụọ mmiri dị mma. Ebe ike dị ọcha, enwere ike ịnweta yana nchekwa. Na nke a na-eji ala ụmụ amaala na ihe ọmụma ha kpọrọ ihe ma na-asọpụrụ, anyị nwere ike ibi ndụ kwekọrọ na okike.
Anyị hụrụ ụmụ anyị n’anya, anyị ga-emekwa ihe ọ bụla iji chebe ha. Anyị na-ajụ inye ha ụwa gbajiri agbaji na nke dị ize ndụ. Atụmatụ doro anya, zuru ụwa ọnụ iji wepụ mmanụ ọkụ bụ akụkụ mbụ nke akụkọ ka mma maka ụmụaka niile, na ọgbọ n'ọdịnihu. Ndị ọchịchị ga-emerịrị ya ugbu a, maka idi mma ụmụ anyị.